Ny rehetra momba ny kefir: tombontsoa, ​​karazana ary maro hafa! | Nutri Diet
Ahoana ny fakana kefir hamoizana lanja
Raha mila manatsara ny drafitry ny sakafo ianao, kefir dia sakafo mendrika hodinihina noho ny tombony lehibe azo avy aminy. Azonao atao ny mampiasa azy io ho solon'ny yaourt, ohatra, noho ny fatran'ny siramamy ambany. Betsaka koa ny olona mampiasa azy io ho sakafo tokana amin'ny iray amin'ireo sakafo efatra na dimy isan'andro.
Momba ny sakafo mampihena lanja, ny sakafo mampiahiahy antsika amin'ity tranga ity dia mifanaraka amin'izy ireo. Mila miloka fotsiny amin'ny karazany ambany amin'ny siramamy ary tsy misy tsiro fanampiny. Aorian'izay dia azonao atao ny manandrana manadoka azy ao an-trano amin'ny fomba maro.
1 Inona no atao hoe kefir?
3 Kefir rano
4 Kefir omby
5 Goat kefir
Inona no atao hoe kefir?
Vokatra vita amin'ny ronono izy io. Izy io dia vita amin'ny ronono mihombo (omby, ondry na ronono osy dia azo ampiasaina) miaraka amin'ny kefir nodules, izay misy bakteria asidra laktika, masirasira ary polysaccharides. Ny niandohan'ity fisotroan-dronono ity dia any amin'ny faritr'i Kaokazy, na dia hita any amin'ny ankamaroan'ny supermarket aza izy io ankehitriny - jereo ny fizarana yaourt.
Manankarena proteinina, vitamina B, mineraly ary bakteria tsara, ity sakafo ity dia misy matevina tsy tapaka. Raha ny tsirony dia mamy sy marikivy (mahery noho ny yaourt mahazatra). Ny sasany somary manaitaitra. Koa satria ny kinova voankazo dia mety misy siramamy eran'ny sotrokely isaky ny mahasoa, tsara kokoa ny mandeha amina karazana mahazatra. Azonao atao ny mandray azy samirery na manampy azy amin'ny malama sy salady.
Ny toetra Probiotic (yaourt mihoatra ny normal) dia omena azy, ampidirin'ny kefir nodules. Amin'izao fomba izao, manampy amin'ny fitazonana ny fifandanjana amin'ny bakteria tsinay, ary koa ny fitsaboana ny fivalanana sy ny fivontosan'ny tsinay.
Ny bakteria tsara dia mampihena ny aretin-ketotra, hampiroborobo ny fahaizan'ny tsinay mihetsika ary manolotra fanamaivanana amin'ny vavony mikorontana. Tsy toy ny bakteria sy ny masirasira amin'ny yaourt, ireo ao amin'ity fisotroana ity dia afaka mijanona ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina mandritra ny fotoana maharitra.
Izy io koa dia nampifandraisina tamin'ny tombontsoa ho an'ny eczema, fihenjanana, fiakaran'ny tosidrà, kolesterola avo, diabeta, fivontosana ary homamiadana. Na izany aza, mbola mila fikarohana bebe kokoa momba izany.
Noho ny probiotics misy azy dia afaka manampy koa ny kefir mitsabo sy misoroka aretina azo avy amin'ny lalan-dra. Toy izany koa, olona maro manana tsy fandeferana lactose no afaka mandray azy satria mampiasa lactose hamokarana asidra lakika, izay tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny asidra misy azy.
Ny kefir rano dia tsy misy ronono, izay manampy azy hanalefaka kokoa sy hanana endrika maivana kokoa noho ny kefir ronono. Soso-kevitra ho an'ny vegans, ary koa ny hitazomana ny tsipika.
Mila mihena ve ianao? Ny kefir rano dia afaka manampy anao hanapaka kaloria vitsivitsy amin'ny sakafonao. Afaka mahazo safidy tsy misy siramamy amin'ny zava-pisotro mahazatra mahazatra ianao amin'ny alàlan'ny fampidirana rano mangirana..
Raha aleonao misotro samirery azy dia alao antoka fa ambany siramamy izy io. Azonao atao ny manampy tsiro ao an-trano amin'ny alàlan'ny voankazo, anana ary zava-manitra. Etsy ankilany, azo ampiana ronono legioma hanomanana Kefir ronono tsy misy ronono.
Ny kefir omby dia mifanaraka amin'ny kefir ronono. Ny rononon'omby no betsaka lanin'ny be Andrefana. Ny karazany marobe dia maneho tombony mihoatra ny ambiny, satria dia azo ampifanarahana tsara amin'ny safidin'ny tena manokana fa tsy amin'ny Kefirs ronono hafa.
Marihina fa ny rononon'omby dia manome zavatra mahavelona maro, ao anatin'izany ny asidra amine ilaina be dia be izay mijanona amin'ny vokatra farany. Azonao atao ny manao kefir an-trano amin'ny alàlan'ny rononon'omby, ary koa ny karazana hafa. Kefir nodules dia tsy maintsy alemana anaty ronono mandritra ny 24 ora farafahakeliny. Mihabetsaka ny tanjaky ny tsirony rehefa mitohy ny fizotra.
Azonao ampiasaina ny kefir omby na ronono hafa hanolo ny akora toy ny dibera, marikivy marikivy ary mazava ho azy yaourt amin'ny resipeo tianao indrindra amin'ny entona nendasina, ovy nopotsehina ary lasopy. Ny vokatr'izany dia sakafo mahavelona kokoa miaraka amin'ny tombontsoa mahavariana rehetra an'ny kefir.
Ny ronono osy dia heverina ho iray amin'ny tsara indrindra amin'ny fanomanana kefir. Ny tombony dia misy fa ny ronono osy dia azo leferina kokoa noho ny rononon'omby. Famantarana tsara amin'ity lafiny ity dia ny fironana hamokatra crème ambonimbony kokoa. Ity kalitao ity koa dia manampy amin'ny famokarana Kefir ronono madio kokoa. Na izany aza, matanjaka kokoa ny tsirony, zavatra mety ho hitan'ny sasany ho maharatsy ny sasany ary ho pro ataon'ny hafa. Toy ny amin'ny zava-drehetra, miankina amin'ny safidinao manokana ihany koa izany.
Na miloka amin'ny kefir omby na Kefir osy ianao, ny zava-dehibe hahazoana tombony tsara indrindra avy amin'ny kefir, hoy ny manam-pahaizana dia ny ronono ampiasaina dia biolojika ary avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Ahoana ny fakana kefir hamoizana lanja
Ny hakan'ny devoly, fanoherana voajanahary voajanahary
Yaorta grika: izay rehetra tokony ho fantatrao